Erdogan: Turkiga wax hunguri ah ugama jiro taako ay Suuriya leedahay - BBC News Somali
Madxaweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa beeniyay in damac dhul uu ku hoos jiro howlagallada milatari ee ka socda Suuriya, isagoo eedeyntaasi ku tilmaamay inay "aflagaaddo" ku tahay isaga.
Isagoo maanta ka hadlayay shir, ayuu Erdogan ku eedeeyay xulafada Ankara inaysan ku taageerin waxa uu ugu yeeray dagaalka ka dhanka ah "argagixisada".
"Turkiga isha kuma hayo dhulka dal kale ... Waxaan eedeynta noocaas ah u aragnaa aflagaaddada ugu daran ee naloo geystay," ayuu ka yiri Istanbul.
Image caption Kurdiyiinta
"Dhammaantood Ree-galbeedka, waxay la safteen argagixisada wayna na weerareen - waxaa ku jira NATO iyo dalalka Midowga Yurub," ayuu yiri.
"Waxaan u maleynayay inaad ka soo horjeeddaan argagixisannimada iyo argagixisada. Maxaa dhacay? Goormaad bilowdeen inaad la safataan argagixisada?"